जस्मीन पेन्ट्सको एक्सक्लुसिभ स्वरुम भरतपुरमा – Saurahaonline.com
जस्मीन पेन्ट्सको एक्सक्लुसिभ स्वरुम भरतपुरमा
चितवन, फागुन २१ । जस्मीन पेन्ट्सले चितवनको भरतपुरमा एक्सक्लुसिभ स्वरुम ‘रोयल कलर प्यालेस’ संचालनमा ल्याएको छ । आज (शुक्रबार)बाट भरतपुर उपमहानगरपालिका–१० स्थित एयरपोर्ट अगाडि एक्सक्लुसिभ स्वरुम संचालनमा आएको हो ।
सो स्वरुपमाबाट विभिन्न किसिमका रङहरु सर्वसुलभ मूल्यमा ग्राहकहरुले खरिद गर्न सक्ने छन् । सबै किसिमका रङहरु एकै ठाउँमा पाउने भएकाले ग्राहकहरुलाई धेरै सहज हुने जस्मीन पेन्ट्सका प्रवन्ध निर्देशक लक्षमण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । स्वरुममा रङसंगै घरका डिजाईन र कलरको डिजाईन भएकाले एकै ठाउँबाट आफूलाई मन पर्ने रङ किन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले चितवनबासीको चाहना अनुरुप नै दुई दशकपछि यस स्वरुम संचालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
चितवनमा उत्पादन हुने जस्मिन पेन्ट्स देशका करिव ७० जिल्लामा स्वरुम स्थापना गरि विक्री वितरण गरिरहेको छ । चितवनमा विभिन्न हार्डवेयर पसलहरमा जस्मीन पेन्ट्स उपलब्ध छ ।
स्वरुमका प्रमुख जीवन खरेलले ग्राहकहरुलाई आवश्यक सुझावसंगै मन पर्ने रङहरु विक्री वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । मनकामना ग्रुप अफ कम्पनिज अन्तरगत जस्मिन पेन्ट्स उत्पादन भईरहेको छ । २०५१ सालदेखि भरतपुरको लंकुमा कारखाना स्थापना गरि जस्मिन पेन्ट्सको उत्पादना सुरु भएको छ । दुई दशक इतिहास बोकेको यस पेन्ट्स आईएसओ ९००१ः२००१ प्राप्त कम्पनी हो भने उत्पादित वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, बजार पूँजीकरण ४३ खर्ब नजिक २०७८, १२ श्रावण मंगलवार
चितवनका डा. विश्वनाथ पौडेल योजना आयोगको उपाध्यक्षमा २०७८, १२ श्रावण मंगलवार
घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति ? २०७८, १२ श्रावण मंगलवार
राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ निर्देशिका जारी, लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ २०७८, १२ श्रावण मंगलवार